Le yiApple Park, exelelwe ngumgqatswa ukuba asebenzele iApple | Ndisuka mac
Le yiApple Park, exelelwe ngumgqatswa ukuba asebenzele iApple
Kwiiyure zokugqibela besizazi ngolwimi lwaseMelika, enye yeefayile ze- Ukubhalwa kotyelelo eApple Park, ngumntu owayezimase udliwanondlebe lomsebenzi. Amagama otyelelo, apapashwe kwiReddit, asusiwe. Ngayiphi na imeko, uninzi lweendaba luyithathile kwaye kuSoy de Mac sikuxelela ngayo.
Kwisicatshulwa Singafumana umbono wokusebenza ngaphakathi eApple Park, ootitshala kunye oomatshini bekhofi abenziwe ukuba basebenze kwi-iPad. Amava esiwaziyo esandleni solu ndwendwe, kwelinye lawona maziko agciniweyo emhlabeni.
Undwendwe lusixelela oko Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukubhalisa. Emva koko bamnika i u kuvunywa, kunye negama lakho kunye nomhla osebenzayo wosuku. Emva koko bamalathisa kwi Isakhiwo esikhulu. Ngexesha lohambo, imithi kunye nokungalingani okujikeleze izakhiwo zeApple Park kunokuthakazelelwa.
Ukufika kwethu kweso sakhiwo, safumana abezokhuseleko abachongwe ngeeyunifomu eziluhlaza kunye Abamkeli bamkeli ngehempe eziluhlaza, abasebenza njengezikhokelo. Indima yaba baqeshwa iyafana naleyo yenziwa kwiVenkile ye-Apple, de ube unikwe umntu onoxanduva lwesicelo sakho. Aba basebenzi bakukhokelela kwindawo yokulinda, nalapho ezona nkcukacha zincinci zigcinwa: iisofisi ezimnandi, izitulo ze-ergonomic, kunye neekeyiki kunye nekofu. Apha sifumana IiPads zokuhambisa ixabiso elifanelekileyo lekofu, okanye amanzi kubushushu obufunekayo.
Nje ukuba igumbi apho udliwanondlebe lwenziwa khona, lenziwe ikakhulu iinkuniLe mingxunya yokungenisa umoya kufuneka ibe ngaphezu kokulingeneyo, njengoko amagumbi emiswe kakuhle, kodwa akukho ziqhekeza zingeniswayo. Isilingi senziwe ngegranite, kunye neendonga zeglasi.
Izizathu zokuba amagama anyamalele kwiReddit etshatileyo aziwa. Ngokuqinisekileyo kwa umhleli ofanayo urhoxisile ukunqanda ukwenzakala kwinkqubo yokhetho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Le yiApple Park, exelelwe ngumgqatswa ukuba asebenzele iApple
UDrake, ii-betas, iziphumo zezemali nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
IMacOS Mojave yesibini yeBeta kaRhulumente ngoku iyafumaneka